निम्बू कुखुरा (Min० मिनेट खाना) - व्यंजनहरु
निल्ला वेफर मिनी चीज़केक्स कुनै बेक गर्दैन
कुखुराको पप पाई पफ पेस्ट्री पेन क्रीम चिकन सूपको
कुटीज चीज र रिकोटा चीज समान छ
जिमी ग्रीक सलाद ड्रेसिंग सामग्री
कति कपहरू फ्रिजन पालकको १० औंस हो
कागती कुखुरा स्वादिष्ट भोजन हो जुन केवल एक मुट्ठीभर सामग्रीहरूको आवश्यक हुन्छ!
कुखुराको टेन्डर भागहरू पैन-फ्राइड र साधारण ट्यान्जी-मीठा नीम्बू ससमा फ्याँकिएका हुन्छन्। तपाईं ताजा कागतीको स्वाद हराउन सक्नुहुन्न। सही हप्ताात्रि भोजनको लागि यसमाथि चामलमा सेवा गर्नुहोस्।
चिकन टेन्डर बनाउन
तपाईंसँग कहिले भएको छ हलचल-फ्राई र कसरी मासु यति र d्गीन टेन्डर प्राप्त आश्चर्य? प्राय: यो कल गरिएको टेकनीकको कारणले हुन्छ मखमली ।
मासु (गाईको मासु वा कुखुरा) अण्डाको सेतो, कोर्नस्टार्च, तेल, र अक्सर अन्य सिरक जस्ता अन्य योजकहरूको संयोजनमा मरीन गरिएको छ। कोर्नस्टार्च एक प्राकृतिक टेन्डिराइजर हो (र यो नुस्खामा प्रयोग गरिएको साथै धेरै अन्य स्ट्राइ फ्राई मनपर्नेहरू र पनी मंगोलियाली गाई )!
लेमन कुखुरा कसरी बनाउने
यो सजिलो चिकन नुस्खा केवल simple सरल चरणहरूमा तयार छ!
पासा कुखुराको स्तनहरू र अण्डा मिश्रणको साथ टस (तल प्रति नुस्खा)। चटनी बनाउँदा फ्रिज गर्नुहोस्।
गोचानी खैरो नहोउञ्जेल कुचोमा कुखुरा फ्राई गर्नुहोस्।
सॉस थप्नुहोस् र गाढा र बबलै सम्म पकाउनुहोस्। कुखुराको साथ टस र सेवा गर्नुहोस्।
यदि तपाईं हतारमा हुनुहुन्छ भने ठीकमा सॉस खन्याउनुहोस्, तर मलाई प्यानबाट कुखुरा हटाउन मन दिनुहोस्, ससको प्रयोग गरेर प्यान डिग्लिज गर्नुहोस्, त्यसपछि कुखुरालाई फेरि भित्र्नुहोस्।
निम्बूका स्लाइसहरू, हरियो प्याज वा चाइभ्स र तिलका बोटहरूसँग गार्निश गर्नुहोस्।
सुझाव: सजीलो काट्नका लागि कुखुरालाई काट्न करिब १ minutes मिनेट पहिले स्थिर गर्नुहोस् यदि समयले अनुमति दिन्छ भने (वा यसलाई काट्नुहोस् यो पूर्ण रूपमा डिफ्रोस्ट नभएको खण्डमा)।
यो राम्रो छ ताजा शाकाहारीहरू जस्तै तिल Bok Choy वा साधारण रूपमा उमालेको ब्रोकोली ।
नीमन चिकन अगाडि बढाउन वा एक डबल ब्याच बनाउनको लागि एक ठूलो डिश हो ताकि तपाईंसँग धेरै बचेको हुनेछ। यो फ्रिजमा to देखि days दिनसम्म सजिलो खाजाको लागि राख्नेछ!
टेकआउट भाँडा भन्दा राम्रो
तिल चिकन - कोमल र स्वादिष्ट
मीठो र खट्टा पोर्क - fav डिश!
चिकन चौ मीन - घरेलु चटनीको साथ!
तेरियाकी चिकन - छिटो र बनाउन सजिलो
गोमांस र ब्रोकोली - min० मिनेट खाना!
तयारी समयपन्ध्र मिनेट कुक समयपन्ध्र मिनेट म्यारिनेट समयपन्ध्र मिनेट कुल समयचार मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन यो सजिलो कागती नुस्खा एक मीठो zesty मनपर्ने छ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ पाउन्ड कुखुराको छाती पासा
▢3 चम्मच कर्नस्टार्च
▢दुई चम्मच म बिलो हुँ
▢दुई चम्मच तरकारी तेल
▢¾ कप कुखुराको ब्रोथ
▢१ ½ चम्मच कर्नस्टार्च
▢¼ कप चिनी
▢3 चम्मच कागतीको रस
अण्डा, कोर्नस्टार्च र सोया सॉसको साथ टोस् चिकन। १ 15 मिनेट फ्रिज गर्नुहोस्।
एउटा सानो कचौरामा सॉस सामग्री जोड्नुहोस्।
मध्यम-तातोमा तातो तेलको तेल। अण्डको मिश्रणबाट कुखुरा हटाउनुहोस् कुनै पनि अधिक ड्रप बन्द गर्न अनुमति दिँदै। ब्याचमा चिकन थप्नुहोस् र ब्राउन नभएसम्म र stir मिनेट सम्म पकाउँनुहोस्।
सास थप्नुहोस् र गाढा नहुञ्जेल, 3-4- minutes मिनेटसम्म।
तिलको दाना र कागती पाges्ग्रा संग सजाउनुहोस् (वैकल्पिक)
सजिलो ह्यान्डलि .को लागि, फ्रिजरमा कुखुरा १ cutting मिनेट काट्नु अघि (वैकल्पिक) राख्नुहोस्। क्रिस्पी कुखुराको लागि, म्यारिनेट गरिएको कुखुरा मकैको स्टार्चमा धुन गर्न सकिन्छ र bat-5-5 डिग्री सेल्सियसको bat 350० डिग्री फ्रिमा सानो डुches्गामा गहिरो तलाइन्छ। बाक्लो सास र कुखुराको साथ टस।
क्यालोरिज:२55,कार्बोहाइड्रेट:२२g,प्रोटिन:२g,मोटो:6g,पागलिएको बोसो:3g,कोलेस्ट्रॉल:११3मिलीग्राम,सोडियम:12१२मिलीग्राम,पोटासियम:1०१मिलीग्राम,फाइबर:१g,चिनी:१g,भिटामिन ए:।IU,भिटामिन सी:9मिलीग्राम,क्यालसियम:१मिलीग्राम,फलाम:१मिलीग्राम
कीवर्डकागती कुखुरा कोर्सचिकन, मुख्य पाठ्यक्रम पकाइयोअमेरिकी, एशियाई फ्यूजन© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।